AUMBI: Mepee ngwa ngwa iji mepụta USB bootable na Windows | Site na Linux
Ndị anyị bụ ndị ọkà mmụta sayensị kọmputa ma ọ bụ na anyị nwere mmasị na sayensị kọmputa na nnukwu agụụ, anyị maara nke ọma, kedu a Obere USB, ma ọ bụ bootable ma ọ bụ Initializable, na Spanish. Agbanyeghị, maka ndị na-amachaghị ihe n'okwu a, nke a abụghị naanị ihe dị mfe Ngwaọrụ USB nke na-ebu n'ime onwe ya, otu ma ọ bụ karịa Sistemụ arụmọrụ, kwesịrị ekwesị na-agba ọsọ, ma gị ndozi ma gi jiri.
Iji mepụta ụdị ngwá ọrụ a, na nke ọ bụla Usoro njikwa, enwere ọtụtụ Ngwa (Ngwa) dị, ma na nke a, akwụkwọ a na-elekwasị anya na ya AUMBInke a ọhụrụ emeghe iyi ngwa, kere maka nzube a, na Windows.
Agbanyeghị, ọ bara uru na-echeta Ngwa nke ụdị a, ya bụ, ngwa na-enye anyị ohere iburu otu ma ọ bụ karịa, Sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ bootable, n'ime a usb drive iji na kọmputa ọ bụla, e nwere ọtụtụ.
Iji mara ha, ị nwere ike ịnweta akwụkwọ anyị gara aga akpọrọ "Ndị njikwa maka ịdekọ ihe oyiyi diski na ngwaọrụ USB", ebe a na-akpọ Ngwa ndị kachasị baa uru na ndị a ma ama nke ụdị a, ma multiplatform, na naanị maka GNU / Linux, Windows na MacOS.
1 AUMBI: Ezigbo USB MultiBoot Installer
1.1 Gịnị bụ AUMBI?
1.2 Atụmatụ ma ọ bụ uru ndị ama ama?
AUMBI: Ezigbo USB MultiBoot Installer
Gịnị bụ AUMBI?
AUMBI pụtara "Ezigbo USB MultiBoot Installer" n'asụsụ Bekee, ma ọ bụ "Ezigbo Multiboot USB Installer" n’asụsụ Spanish. Ma ọ bụ, akụrụngwa ngwanrọ eji eji detuo a Usoro njikwa site na a Faịlụ ISO ka a usb drive nchekwa.
N'ụzọ dị otú ahụ na echichi ma ọ bụ ule nke otu ma ọ bụ karịa GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ, Windows, na ụfọdụ ihe ndị ọzọ eji ebu ụzọ rụọ ọrụ. Na ikpe nke Sistemụ arụmọrụ webatara, na-enye ha ohere ịbịa hazie ya nnọgidesi ike n'ihe, nke ahụ bụ chebe agbakwunye faịlụ ma ọ bụ mgbanwe emere banyere ha.
Ndị okike ya kọwara ya otu a, na ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị:
"AUMBI bụ ihe eji eme ihe na-emeghe emeghe nke na-enye anyị ohere ịmepụta USB buru ibu na sistemụ arụmọrụ dị iche iche; Dabere na YUMI, AUMBI na-ezube iji akara nke koodu ahụ wee melite mgbe niile, ngbanwe nke mbụ ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ nwere ikike ịba ụba nke ọkachamara na menu buut. Naanị ihe karịrị 1MB, AUMBI bụ uru zuru oke ka ebugharị n'ụzọ dị mfe".
Atụmatụ ma ọ bụ uru ndị ama ama?
Ebe ọ bụ a emeghe ndụdụ nke 'YUMI« ọ pụtara ìhè, n'etiti ihe ndị ọzọ, maka:
Ọsọ ọsọ na ezigbo mmalite nke koodu isi.
Nkwado maka asụsụ ndị ọzọ. Bụ asụsụ Spanish, akwadoro ya n'ụzọ zuru oke.
Ọmarịcha akwụkwọ na Spanish na Bekee, ma na HTML ma PDF.
Nkwado maka ndị ọzọ Nkesa GNU / Linux na Bootable Tools nke oge a.
Na nkenke, AUMBI bụ ihe magburu onwe ya Mepee ngwa ngwa iji mepụta bootable USB na Windows, ebe ọ bụ na imeghe kpamkpam na-enye ohere ka emelite ya karịa gbasara YUMI, ma jiri obi ike na ntụkwasị obi mee ihe. Ke adianade do, o nwere ihe nkwado maka Spanish asụsụ na maka Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe oge a.
Onwe m, oge ole na ole m na-eji Windows bụ iji YUMI, ma ugbu a, m ga-atụkwasị na AUMBI ka m ndepụta nke Free Software na Open Source Ngwa na Windows.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «AUMBI (Absolute USB MultiBoot Installer)» nke obu ohuru ngwa nke «Código Abierto» dị maka ịmepụta bootable USB na Windows, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka mmadụ niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » AUMBI: Mepee ngwa ngwa iji mepụta USB bootable na Windows
Nnọọ. Mgbe ịmalitere ngwanrọ na m ga-enweta ihuenyo na-ezighi ezi nke na-agwa m na ụfọdụ emeelanjehie dlln'ihi na ndekọ na-efu. Ahụrụ m na ebe nrụọrụ weebụ gị zuru oke na nkuzi mana achọtaghị m ihe ọ bụla metụtara isiokwu a. Ị nwere ike ị nyere m aka?
Ekele Hernan! Nke a bụ GNU / Linux, Free Software na Open Source Blog. Echere m n’ajụjụ gị gbasara Windows. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịchọ aha ụlọ ọba akwụkwọ (DLL) ndị akpọrọ na ihuenyo njehie gị ma gbalịa ịchọta ngwugwu ma ọ bụ mgbochi nwere ha ka ị nwee ike iwebata ha na sistemụ arụmọrụ gị.